I-Deja vu: U Buzova noBatrutdinov baphinda iseshoni yesithombe seTarabuzikov
I-Instinct u-Olga Buzovoy kwiminyaka eyonwabileyo yomtshato wakhe kunye noDmitry Tarasov uhlaziywa rhoqo ngeefoto ezintsha zesibini. Aba babini bahlela ukuzondana komnye nomnye, kwaye umdlali webhola webhola lebhola wancinca umfazi wakhe ngeemichiza ezinobumnandi.
NgoFebruwari 2016, kungekudala ngaphambi kokuba aphule, uTarabuziki wenza isicatshulwa sakhe sokugqibela kunye noBelle Potemkin. Amaqabane afakwe kwi-T-shirts kunye neentengiso kunye nokubonisa ngokunyanisekileyo uthando.
Kuthiwa kuthi ngeli xesha uDmitri wayesele eqhelane noAnastasia Kostenko, nangona kwiifoto ongenakukuthi kwiinyanga ezilishumi nje kuphela, uDmitry Tarasov no-Olga Buzova baya kufumana isatifiketi sokuqhawula umtshato ...
U-Olga Buzova kunye noTimur Batrutdinov babonakala kunye nokukhangisa kwe-Bella Potemkin
Emva koqhawulo lomtshato iTarabuzikov, abahlobo babo abaninzi baphoqelelwa ukuba bakhethe umntu - u-Olga okanye uDmitry. Kwakungenakwenzeka ukugcina ubuhlobo kunye nabatshatileyo bobabili. Umqambi waseRashiya odumile uBot Potkin wakhetha ukukhetha uBuvoy. Namhlanje kwi-intanethi kukho iifoto zeqoqo elitsha likaBella, elipapashwe ngu-Olga Buzova noTimur Batrutdinov.
instagram.com/peopletalkru Lo mbhangqwana ubelokhu ugcina abalandeli babo kunye nabaculi bexesha elidlulileyo kwiinyanga, ngokukhawuleza bakhuphe amahemuhemu ngokuthandana kwabo. I-photo shoot now ikhumbuza ukudubula kwesithombe seTarabuzikov: izindebe ezifanayo, ezifanayo. Kuyathakazelisa ukuba iqoqo elitsha lePotemkin lidibene ... nebhola.
instagram.com/peopletalkru Ukubonakala okulandelayo kweBuzova kunye neBatrutdinova kunye kwabangela ukuba ingxoxo ephosakeleyo kwiintanethi zentlalo. Abanye abasebenzisi bayaqiniseka ukuba abaculi baholele wonke umntu nge "inoveli" yabo, kwaye abanye bakholelwa ukuba umtshato usekupheleni kwekona:
ms.iren63 Bablo banqunyulwe ukuba banalo lyuuboff kwaye babalekela ...
skibulik Ndivuya gqitha ngo-Olya!
tata.andreeva1000 Ibini elidibeneyo (kungekhona ukuba kunye neTarasov isisidenge neqhayiya)
prikit_sumki_krd Inomdla kakhulu kuya kuba yimbini. Akakholelwa kumadoda, kwaye akakholelwa kubafazi
galechkami Emfanekisweni wokuqala, bahle kakhulu! Ndiyamthanda uTimurchik, u-Olga uyahlonipha amandla okusebenza!
Ngaba ukholelwa kwiqela leBatru Buzikov?
Petr Krasilov kunye no-Irina Shebeko
Abaxhamli abazange baqaphele u-Alla Pugachev ovuselelwe. Iseshoni yesithombe esitsha kwinqaba
UAlexandra Gozias uqhayisa amahemuhemu ngo-Xenia Borodina
"Viking" kunye noDanilo Kozlovsky wayegxekwa kakubi nguMaxim Fadeev
Uthando lokuqala luka-Inna Volovichova lwaba ngumnxila
Fritata kunye namazambane kunye anyanisi
Iindlela eziphambili zokulungisa izilwanyana ekhaya
I-Ice Cream Cocktail
I-Scallops nge-asparagus eluhlaza kunye neparmesan
I-curd cheese biscuit «Echpochmak»
Amathinari apheleleyo amatamatisi
I-Aesthetics yama-30 ekuqokeleleni ubucwebe be-Moonka dEmiurge
Praline kunye nama-walnuts nobusi
Ongaziwayo uphupha ntoni?
AbaH Hamburgzi abaneebhola kunye ne-cheese brie
I-Pizza kunye namazambane kunye ne-rosemary
Ungamvusa njani umntu embhedeni?
Impawu zokuqala ze-appendicitis
Ama-Sauces ukuya kuma-saladi: zokupheka zilula (umfanekiso)
Imihlathi ebantwaneni abanomkhuhlane ophezulu